Nhau - "Gadzira Chikwata kuburikidza Kubatana uye Kubatana" -Chikwata Chekuvaka Chiitiko cheDhipatimendi Rekushambadzira reKangyuan Medical Rakasvika Kumugumo Unobudirira
Pakasvika chirimo, zvese zvakava zvipenyu. Musi waMarch 26, 2021, iyo Dhipatimendi rekushambadzira reHaiyan Kangyuan Medical Instrument Co, Ltd. yakabata chiitiko chekuvaka timu muNanbei Lake. Wese munhu akanakidzwa nebasa iri nekuseka, mufaro, nechido.
Na9 o 'wachi mangwanani, iro Dhipatimendi rekushambadzira reKangyuan rakasvika kuNanbei Lake nenguva. Mushure mekuita zvakapusa kuita chando, takapedza kuunganidza uye takagadzira mureza wechikwata, kuumbwa uye sirogani. Ipapo kuvaka kwechikwata kwakatanga. Mutungamiri wechiitiko akatitungamira kuti tiite mitambo yakawanda inonakidza. Takashanda pamwechete uye takabatana pamwe chete. Iyo mhepo dzimwe nguva yaive yakanyanya uye dzimwe nguva ichizorora. Izvo hazvina chete kudzikisira chinhambwe pakati peumwe neumwe, asi zvakare zvakawedzera kubatana kwechikwata, zvichiratidza mweya wekubatana, kushanda nesimba uye kufambira mberi kwakanaka kwevashandi vaKangyuan '.
Masikati, takauya kuB & B mugomo ndokutanga barbecue yekuvhurika.Tinoshanda pamwechete. Vamwe vakanogeza muriwo nekucheka nyama. Vamwe vakagadzira bhengi. Tese isu tanga tizere neshungu uye isu tese tainzwa kubatikana uye tichifara zvekuti iyo diki B&B yaive izere nekudziya uye rudo.
Mushure mekudya kwemasikati, munhu wese akatarisana neBaiyun Pavilion neShanhai Lake uye vakanakidzwa nemhepo inodziya yemuchirimo uye kuimba kwakanaka kweshiri. Mune fomu yetiyi pati, isu takabatanidza kurudziro kubva kune ino yebasa rekuvaka chiitiko pamwe nebasa reKangyuan rezuva nezuva kuti tibatanidze huchenjeri hwedu uye takabatana kuongorora inoshanda zvakanyanya uye inoenderana nzira yekushanda.
Muchiitiko ichi chekuvaka kwechikwata, takagovana chiitiko chinoshamisa mukudikitira, kuseka, kukurukura uye kunzwa kwepfungwa. Mune ramangwana, isu, takabatana seumwe, maoko mumaoko, tichinzwisisana, takanangana nechinangwa chimwe chete, tichashanda nesimba kusimudzira kuvaka kweindasitiri yekurapa neyehutano.